MAYDHAYAASHA CUSUB EE XILLIGA QABOOBAHA EE DARIIQYADA WADDADA: SHURUUCDA QALABKA UNUGYADA - XOOLAHA
Xilliga jiilaalka leh dariiqa waddada
Mid ka mid ah meelaha ugu faa'iidada badan ee xoolaha ayaa ah taranta taranta. Xaqiiqdii, dhalmada sare iyo taranka dhaqso ah ee faraca, baahida loo qabo hilibka iyo furka labadaba waa doodo halis ah oo ku habboon doorashadan. Iyada oo habka saxda ah ee macquulka ah, waxaad heli kartaa laga bilaabo 4 ilaa 6 rodol sanadkiiba. Qodobkani waxa aanu eegaynaa sida loo qorsheeyo dhaaminta iyo hagaajinta si sax ah si loo hormariyo ganacsi, xoolaha u ilaaliyo caafimaadka iyo ka hortagga wax soosaarka xilliyada qaboobaha.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka akhriska jiilaalka
Bakteeriyadu waxay gashaa 30-maalmood uur. Isku celceliska caruurnimada 1 rodol wuxuu ka bilaabmaa 5 illaa 10 madax, sidaa darteed, isagoo diyaarinaya habboon xilliga jiilaalka, heerka horumarka xoolaha waa la sii wadi karaa. Marka la qorsheynayo xilliga qaboobaha, waxaan tixgelin doonaa waxa aan ku guuleysaneyno iyo halka aan u baahanahay si aan u hubino.
Ma taqaanaa? Dhammaan noocyada la yaqaan ee bakaylaha, ficillada oo dhan adduunka oo dhan, wax ka badan 20 ayaa la siinayaa.
Faa'iidooyinka qumman waa la tixgelin karaa:
Xayawaanka yaryar ee dhasha xilliga qaboobaha waxay leeyihiin caafimaad wanaagsan;
qashin koritaankuna wuu kobciyaa;
Dumarka dhasha xilliga jiilaalka waa kuwo sii kordhaya;
jiiska jiilaalka ayaa tayo fiican leh;
qabow, xoolaha ayaa miisaan ka fiican;
xilliga jiilaalka, ma jiro dhiig-bixiye kuwa qaadaya cudurrada kala duwan ee faafa kaas oo bakaylaha ay aad u nugul yihiin;
ammonia ma aha mid uumi-bax ah, taas oo saameyn aad u xun ku leh caafimaadka boodhka dheer. Waxaa la fahamsan yahay in marka hawo aan ku filneyn ee dhismaha ammonia xayawaanka xayawaanka, uumi-baxa, jidhkooda ku galaan qaab shucaac halis ah.
Waxa aad u baahan tahay si aad u bixiso jiilaalka qaboobaha si aad u gudubto dhib la'aan:
Dammiinku waa in lagu abaabulo qol diirran, maxaa yeelay ficil galmo ayaa si xoog leh ugu dhacaya qabowga;
si ay u xakameyso dareeraha hooyada: si loo xiro meelaha kala gedisan, si loo diiriyo derbiyada, gogosha diiran ee dhulka daboolka;
nadiifinta joogtada ah iyo hawo qaboojiyaha;
joogitaanka joogtada ah ee biyaha kulul iyo cuntada diiran;
kororka macmalka ah ee iftiinka qoraxda.
Ma taqaanaa? Bakteeriyadu waxay leedahay ilmo-galeenka ilmagaleenka ah, sidaas darteed waxay u qaadan kartaa laba litters isla waqti isku mid ah, oo waxay noqon kartaa xayawaanka ragga kala duwan oo uur leh waqtiyo kala duwan. Tani waa mid ka mid ah qalabka dabiiciga ah si loo ilaaliyo noocyada - bacriminta, sababtoo ah dabeecadda, bakaylaha waxay ku noolyihiin muddo hal sano ah, isla markiiba ama marka dambe noqdaan wax la yiraahdo.
Kuwani waa, dhab ahaantii, shuruudaha caadiga ah, kaliya xilliga jiilaalka, waxay ku shaqeeyaan oo keliya wadar ahaan.
Waa maxay nooca bakaylaha ay ugu haboon tahay taranta xilliga jiilaalka
Marka aad dooranayso taranta taranka, marka hore waxaad u baahan tahay inaad fahamto waxa aad ganacsigaagu tahay. Dhammaan noocyada bakaylaha waxay u qaybsan yihiin:
Fiiro gaar ah waa in la siiyaa xaaladaha jawiga degaankaaga. Si aad u iibsato nooc gaar ah ayaa ugu fiican xannaanada. Waxa kale oo aad talo ka heli kartaa khubaro ku saabsan caabbinta dhaxan ee caan ka mid ah.
Iska hubi naasaha ee bakaylaha sii kordhaya.
Tusaale ahaan, jiilka caan ah ee Flandre, heerkulka qabowga ma sameyn doono. Wixii dayactir ah, unugyada leh unugyada kululaynta ayaa guud ahaan loo baahan yahay, sidaas darteed, Cagaarka iyo Caanaha Goobta ayaa inta badan loo isticmaalaa xilliga qaboobaha.
Laakiin halkan waa lagama maarmaan in la qeexo in tani ay khusayso jihada hilibka. Waxay isku mid yihiin Flandram, laakiin waxay u adkahay heerkulka hooseeya, oo aan qabin cunto iyo waxyaabo aan ku filnayn. Iyo cayayaanka ayaa si cajiib leh ugu qulqulaya jahwareerkooda - laga bilaabo 10 ilaa 12 bakaylaha hal qashin. Laakiin xitaa iyaga loogu talagalay, heerkulka aad u hooseeya ee bakaylaha sida caadiga ah u qaadaan burrows ma aha mid ku habboon, sababtoo ah, sida dhaqanka, muujinaysaa sida maadooyinka sida ugu fiican qoday bakaylaha dhexdhexaad ah.
Waa muhiim! Waxa kaliya ee ku jira qosolka jilicsan ee ah bakaylaha jacaylka si qorraxda u qoynaya. Xaqiiqdii, waxay aad u dhib u yihiin maqnaashaha qashinka - cudurada guud ee fayraska iyo geerida xooluhu waxay bilaabanayaan. Goobta ilaalinta bakaylaha waa inay ahaataa hooska dhirta ama ugu yaraan hoosta hoosteeda.
Isugeynta unugyada waddooyinka
Abuuritaanka xaalado wanaagsan, ma joojin kartid taranta xilliga jiilaalka. Iyadoo ku xiran aagga cimilada, noocyada kala duwan ee bakaylaha waxaa lagu hayn karaa:
Beeralayda uurjiifka ah ee ceelka
Arrimaha samafalka xayawaanku waxay ku xiran yihiin sifooyinka aag gaar ah, laakiin xuduudaha muhiimka ahi waa:
qolka dayactirka diiran;
la'aanta qoyaanka iyo naqshadaha;
cuntada gaarka ah ee la xushay, cuntada qoyan - mash.
Waa muhiim! Waa muhiim inaad horey u sii diyaariso jiilaalka ee bakaylaha, maadaama ay lagama maarmaan tahay in laga fogaado isbeddel deg-deg ah ee heerkulka iyo xaaladaha xayawaanka, waa wax walwal u ah noolaha, kuwaas oo si xun u saameeya dhammaan hababka, oo ay ku jiraan habka taranka.
Waa maxay waxyaabaha ugu fiican loo isticmaalo rinjiga
Waa arrin aad u macquul ah marka dhinacyada unugyada lagu sameeyo mabda'a sandwich, inta u dhaxaysa gaashaanka waxaa lagu dhejiyaa lakabka walxaha wax lagu shubo ama xumbo, sababtoo ah waxay ka badbaadisaa labada qabow iyo kuleylka.
Haddii qafisku ka samaysan yahay mesh, waxaa wanaagsan in lagu xiro dibadda iyaga oo leh boorso, kumbuyuutar, jasiirad ama xumbo. Albaabka ayaa sidoo kale lagu xiraa rinjiga.
Fahamka u dhaxeeya iyaga waxaa ka buuxa xumbo. Faa'iidada ka soo baxda gudaha waa in laga saaraa si aysan xayawaanku u daboolin oo aysan u helin sunta. Daboolka qafiska waxaa lagu daboolay kumbuyuutar ama waxyaabo kale oo caadi ah oo daboolay caws, kaas oo ah mid sahlan oo si sahlan loo beddeli karo.
Dhismayaasha kor ku xusan, dhismayaasha waxaa lagu diiriyaa dhammaanba qaababka la heli karo, iyada oo laga bilaabo cagaarka, cawska, ilaa bustayaal duug ah, jaakad, iyo waxay noqon laheyd mid ku haboon in dib loo qoro wax aan biyuhu ka jirin. Kaqaybka ilmo-galeenka ee bakaylaha waa mid aan loo diirin habab gaar ah, sababtoo ah wax ka yar maalinti ka hor dhalashada, haweeney foosha ku jirta ayaa caloosha ka soo baxaysa, waxayna dhajisaa buulkeedii qashinka mustaqbalka.
Saldhigyada cuntada iyo biyaha ayaa sidoo kale lagu daboolaa walxaha polyetylen. Hase yeeshee, waa muhiim, in la kululeeyo dhismayaasha degaanka ee xayawaanka, si ay u abaabulaan hawo si aanay u dhicin halkaas.
Waa muhiim! Ha ku diirin darbiga unugyada xayndaabyada leh sida saqafka dareeraha ama polyetylen, ma aha oo keliya inaysan xakameynin heerkulka si kastaba ha ahaatee, waxay kaloo gacan ka geysataa muuqaalka sawirada ee u nugul xayawaanka.
Meeleynta kuleyliyaha korontada gudaha
Sida farsamadu muujinayso, kuleylka qoryuhu wuxuu u oggolaanayaa maaha kaliya in kor loogu qaado xayawaanka yaryar ee xilliga qaboobaha, laakin si loo xoojiyo korriinkooda qiyaastii 2 bilood, iyo in la yareeyo isticmaalka quudinta. Beeraleydu waxay isticmaalaan habab kala duwan, tusaale ahaan:
nalalka infrared iyo filimada;
kuleyliyaha korontada ku shaqeeya ama iibsaday.
Mid kasta oo ka mid ah waxay leedahay faa iido iyo qasaaro. Tusaale ahaan, haddii aad samayso dabaqa diiran ee qafiska, tani waa mid ku haboon sababtoo ah heerkulka la rabo waxaa la hayaa sanadka oo dhan, laakiin kharashka qarashka badani waxa loo tixgelin karaa macquul, baahida loo qabo rakibidda xilliga rakibidda iyo dayactirka joogtada ah ee qoyaanka iyo qoyaanka hawada, taas oo sidoo kale aad muhiim ugu ah bakaylaha.
Baro sida loo sameeyo qafis furan oo loogu talagalay bakaylaha, bakaylaha, baqashada bakaylaha iyadoo la raacayo qaabka Zolotukhin, khamriga hooyada.
Diyaarinta kuleyliyaha korantada, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho sagxadaha la taaban karo, kuwaas oo ah kuwa horay loo dahaaray, isla markaana xajiya kabaha. Dhibaatooyinka naqshadahan waa:
khatarta ah in gaaban, sababtoo ah waxaa jira qoyaan joogto ah ee qolka;
kulaylka ayaa sidoo kale sabab u ah qoyaan;
baahida loo qabo kala-goynta dheeraadka ah ee shabakada xayawaanka geela;
qiimaha la taaban karo.
Hooyo dufan: video
Sidee loo sameeyaa khamriga hooyada la qaadi karo oo aan kuleylka lahayn gacmahaaga
Samaynta boqorad adigaa leh gacmahaaga waa mid dhab ah. Tani ma aha qaab-dhismeed adag, oo la dhigo gudaha caag caadi ah, haddii cabbiruhu uu oggolaado. Krolchikhe ma aha oo kaliya kuleylka, laakiin sidoo kale ammaan. Waxaa ugu wanaagsan in laga dhigo tufaaxa - la shaqeynta qalabkaan waa mid aan qaali ahayn oo sahlan.
Waa muhiim! Caanaha hooyadu waxay ka fiican tahay inay samayso cabbir dhexdhexaad ah, oo ka bilaabanta xajmigaaga lo'da. Khamrigu wuxuu dareemayaa raaxo badan haddii sanduuqani xasuusiyo mink. Tani waa dareenka dabiiciga ah.
Wixii soo saarista boqoradda waxaan u baahanahay:
xayawaan lagu duubay;
xayawaan alwaax ah
maaddada rinjiga (caws, sintepon, balka, tirsa cusub) laguma talin, urta foosha ayaa wareersan kara hooyada cusub).
Laga soo bilaabo qalabka aad u baahan tahay:
niyadjab ama qalin.
Sameynta boqorad diiran, waa in aad marka hore sameysid sawir ka mid ah buulada mustaqbalka. Si aad u bilowdo, jar jilbaha ka soo jilaabbiilaha derbiyada mustaqbalka, dabaqa iyo saqafka. Qiyaasta celceliska qiyaasta la aqbali karo ee derbiyadu waa 35x40 cm. Si aad u dhisto, waxaan u baahan doonaa dhabbayaal dhererka ku habboon. Qaybta afar geesoodka ah 25 cm dheer iyo afar qaybood oo 35 cm dheer ah, derbiga hore waa 50x30 cm, waxaad kaloo u baahan doontaa boorso 30x25x2.5 cm iyo labo xabbo oo ka mid ah 25 cm mid kasta, derbiga gadaashiisa waxaa ku jira laba xayawaan 50x30 cm oo cabbirka iyo laba jajab 50 iyo qiyaastii 25 cm.Dhinaca hoose waxaan sidoo kale isticmaalnaa laba qaybood oo ah 50x30 cm, oo lagu dhajiyay jajabyo ah 50 iyo 25 cm, saqafkana waxaan isticmaalnaa laba xabbo oo tufaax ah 55x35 cm oo leh 55 iyo 30 cm.
Baqdintu waa diyaar. Hadda waxay u baahan yihiin inay isku keenaan. On daaranka waxaan ka buuxin xayawaanka leh caawinta ciddiyaha, xaji xaashida labaad, iyo buuxi meel u dhaxaysa iyaga oo leh rinjiga. Waxaan isku dayeynaa inaanan wax isbeddel ah ku sameyneyno qaybaha. Gelitaanka khamriga hooyada waxaa la gooyaa jajab ama sawir, cabbirku ma aha mid aad u ballaaran, waxa ugu muhiimsan waa in ilmo-galeenku si xor ah u dhex mari karo.
Darbiyada la dhammeeyaa waxaa lagu dhejiyaa nalka. Waxaan ku bilaabaynaa xaqiiqda ah in aan ku dhejinno derbiyada dhinaca hoose, ka dibna xiro guddiga danbe. Daboolka sare waa in la xidho si ay u noqoto mid laga saaro. Tani waa lagama maarmaan si ay u habboon tahay in la nadiifiyo qafiska, iyo kulaylka waa hawo dheeraad ah.
Maaha mid haboon in la dhigo cawska dhulka, ka hor intaan lakabkoodu ka dhicin, haweeneyu waxay cagar dhigtaa halkaas waxayna dooranaysaa fluff. Si aad dabaqa u sii dheeraato, waxaad ku dabooli kartaa galvanized. Waxay ka ilaalisaa xayawaanka ka soo baxa ee bakaylaha iyo ilmo-galeenka. Ha ku seexan dusha sare ee tirsoy cusub - urta foosha ayaa cabsi gelin doona bakayle.
Waa kuwee quutaha iyo cabitaanada ay ku fiican yihiin xilliga jiilaalka
Mid ka mid ah shuruudaha ugu muhiimsan ee ilaalinta bakaylaha waa fursad u helid biyo nadiif ah. Khamrigu waxay leeyihiin nidaam dheef-shiid kiimikaad hooseeya, biyaha ayaa muhiim u ah iyaga, gaar ahaan marka cunnooyinka intooda badani qalalan yihiin iyo wax badan oo hay ah. Iyo jiilaalka waxaa muhiim ah in weli weli ma qaboojin, iyo si fiican u diiriyo. Cabbitaanka waxaa lagu sameyn karaa gacmahaaga ama iibsashada.
Waa muhiim! Xilliga jiilaalka, waa lagama maarmaan in la siiyo quudinta. Waxay ka caawisaa xayawaanka si ay u qariyaan ilkahooda, waxay bixiyaan nuucyo kala duwan oo nafaqooyin ah iyo walxo ka hortag ah, waxay hagaajineysaa habka cuntada dheefshiidka.
Fursadaha loogu talagalay cabitaanada aad ku bixin karto dukaanka:
Koobka - Sida xaqiiqda ah, saxan caadi ah oo ka soo jeeda caag, dhoobo ama waxyaabo kale. Waxaa si fudud loo xaddiday qafiska, dhif jilicsan, si sahlan loo nadiifiyo. Dhibaatooyinka noocaan ah, waxaa la ogaan karaa in xayawaanku inta badan ku dhufanayaan koob, waana in la kormeeraa, iyo wax kale oo ay tahay in la fiiriyo waa in biyaha baaquli uu nadiif yahay illaa xayawaanku marka hore yimaado.
Autodrink (hoosta dhalada) - Koob gaar ah iyo dhalo caag ah. Waxaa lagu rakibay hab sidaas oo kale marka koobta lagu nadiifiyo heer gaara, waxaa laga helaa vacuum, biyo cusub oo nadiif ah ayaa laga shubay dhalada. Faa'iidooyinka - joogitaanka joogtada ah ee biyo nadiif ah, dhalo quraarad ah waxaad arki kartaa marka aad u baahan tahay inaad ku darto biyo, awood yar oo koobab ah ayaa ka ilaalisa xayawaanka in ay ku tuuraan qashinka, iyo qiimaha waa uu hooseeyaa. Xaqiiqdii ma jirto wax dhib ah, haddii kaliya dhalada lagu rakibo si sax ah oo aan hoos u dhicin oo aan cabsi galin dadka degan xaafadaha si ay u dhintaan.
Ibta - Naqshadani waa mid aad u adag. Biyaha waxaa la siiyaa marka bakayle uu taabto kubad gaar ah. Tuubada biyaha ayaa laga sameeyaa birta birta ah, taas oo ka qayb qaadata xaqiiqda ah in bakteeriyadu ka yar tahay biyaha, iyo xayawaanka raba inay yaraadaan. Iyada oo cabitaankan waxaad sidoo kale ku dari kartaa fitamiinada iyo cuntada qalalan. Dhibaatooyinka noocaan ah - waxay ku habboon tahay xoolo yar yar, xilliga qaboobaha biyaha ayaa si dhaqso ah u qaboojiya, daboolana qallafsan. Haddii kale, bakeylka haraadku wuxuu cuni karaa baraf iyo baraf sida ilma adeer ee duurjoogta ah, laakiin waxay noqon doonaan kuwo aad u nugul cudurrada. Waxaa suurtagal ah in cimilada qaboobaha ah si ay u soo qaadato kuleyliyaha kuleyliyaha sida cabitaanka.
Haddii aysan suurtagal ahayn in aad isku xirto qalabka kuleyliyaha - waxaad u baahan tahay inaad ka tagto qofkasto-cabaya iyo mashiinka ibta, kaliya baaquli ayaa sameyn doona. Biyo kulul ayaa lagu shubay, iyada oo si tartiib tartiib ah loogu daray, maadaama ay jaqsiinayso, ilaa lo'da oo dhan la cabbo.
Baro sida loo sameeyo quudinta, quudinta bataarta iyo cabitaanka khamriga.
Waxaad u baahan tahay inaad cabto ugu yaraan 3-4 saacadood kasta. Ama waxaa jira farsamooyin korantada ah, waxay haystaan ​​biyo wakhti dhan saacad, laakiin khasaarihii ugu weynaa waa kharashka korontada.
Muhiimadda quudinta ku habboon jiilaalka
Cunto dheellitiran oo isku dheelitiran ayaa muhiim u ah boodhadhka qashinka wakhti kasta oo sanadka ah, gaar ahaan xilliga qaboobaha, iyo in si joogto ah loo helo biyo nadiif ah. Maadaama nidaamka dheef-shiidku uu daciif yahay, waxay u baahanyihiin inay si joogto ah wax ugu cuna qaboojiyaan, sida cawska ama cawska.
Waa muhiim! Beetroot ee bakaylaha waa mid khatar ah, tops yihiin faa'iido leh, iyo khudradda xididka waa sun.
Laga soo bilaabo cunto ah bakaylaha waxaad u baahan tahay inaad si buuxda u tirtirto macmacaanka, buskudka iyo miraha khudradda iyo cagaarka. Xitaa kaabash cad oo caadi ah waa in la daboolo, waana in la barbar dhigo cuntada si tartiib tartiib ah. Waxay keentaa isku-dhafan iyo kacsanaan. Oo loogu talagalay bakaylaha carbuun, kaabajka waa horey khatar ah. Haddii xayawaankaaga uu qabo xanuunka mindhicirka, waa in la siiyaa dhir cagaaran, geedo ama jilicsan.
Marka la goynayo cawska, waxaa fiican in aan cawska laga qaadin oo aanad hubin, laakiin miiqyada dooxada, indhaha caleenta, larkspur, lakaboorka, duufaanka, xajmiga, xajmiga sumowga ee iyaga loogu talogalay waa sun saafi ah.
Baro sida loola tacaalo bakayleyda, intee in le'eg ee bakteeriyadu ay sii socoto, sida loo daryeelo bakaylaha cusub.
Ka dib markii karootada, khudradda kale ee ugu faa'iido badan ee loogu talagalay quruxda cufan leh waa baradho la kariyey, laakiin ceelasha ceeriin ayaa sidoo kale ku haboon. Ma aha wax fiitamiin ah oo aad u soo jiidasho leh sida uruursanaanta. Aad bay muhiim u tahay nidaamka dheef-shiidka.
Tixgeli cunto ee bakaylaha xilliga jiilaalka. Cunto khafiif ah:
geedo geedeed oo geedo ah - ciribtirka iyo fitamiinada dheeraadka ah;
Hay ka soo baxa qoryaha, burdock, qorshe, yamaarug, dhir iyo qamadi.
Soo ogow inay suurtagal tahay in la siiyo bakaylaha: laamaha cherry, caanaha, dill, zucchini, xididada, saliidda kalluunka, guntinta, geedka, geedka, shiida, badarka, kibista, bocorka, hadhuudhka.
Kaabashka la kariyey iyo baradhada + diirka baradhada;
Cuntada xoogga leh:
jawaabo nafaqo leh;
Faytamiin iyo macdaneyaal dheeraad ah:
fiitamiinno iyo macdano wanaagsan, oo lagu daro cuntooyinka isku qasan;
la qalajiyey ama la qalajiyey miro duurjoog ah, ash buur;
nettle hay iyo giriig ah.
Ma taqaanaa? Waxaa la yaab leh, waxay noqon kartaa sida bakaylaha guri-ku-daaqiga ah si ku-meel-gaar ah u noqdaan kuwo nadiif ah xilliga diiran, ka dibna hawlaha taranku waxay ku soo noqdaan heerkulka hoos u dhaca.
Waxa la rabo in lagu quudiyo bakaylaha xilliga qaboobaha: video
Khaladaadka inta badan marka la abaabulo okolov jiilaalka
Waxaa muhiim u ah abuurayaasha bilowga ah si ay u ogaadaan xeerarka aasaasiga ah ee haynta xoolaha xilliga qaboobaha, si looga fogaado khaladaadka caamka ah:
Waxaad ka tagi kartaa bakayle waqti dheer ku jira kafari ragga. Si dhakhso leh ayey u soo qaadaan marka daboolku aanu weli dhicin - sidoo kale qalad. Bacriminta waxaa si wanaagsan loo sameeyaa inta lagu jiro maalintiiba 3-4 maalmood;
badiyaa waxay si qalad ah u qaataan weli da 'yar, ragga ragga ah. Iyagu ma xalin karaan hawsha, wakhtigoodana waa la lumiyaa;
Ka dib wareega, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u eegto buulka oo aad hubiso inay jirto biyo ku filan, haddii kale haweenku waxay cuni karaan qashin
waa inaadan ku dhicin ilmo-galeenka si aad u badan oo ah okrolami, gaar ahaan haddii cuntada aysan ku jirin qaybaha muhiimka ah;
Qalad aad u weyn ayaa ah in la quudiyo bakaylaha, gaar ahaan dheddigga ee furitaanka nuujinta raashinka loogu talagalay lo'da.
Iyada oo kharashka ay dhogorta leh diyaarinta saxda ah jiilaalka, bakaylaha u adkeysan karaan ilaa -17 ° C. Sidoo kale, quudinta gaarka ah iyo unugyada insuliinta ayaa kuu oggolaanaya inaadan joojin habka loo cusbooneysiiyo daaqsinka. In qashinka laga helay jiilaalka, waxaa jira faa'iidooyin muhiim ah, waxaana lagu talinayaa inay ka baxaan lo'da ee xilli ciyaareedka soo socda.
Hagaajinta jiilaalka: video
Saaxiib ayaa ii sheegay in isaga oo leh foormo ilmagaleenka oo si fiican loo daboolay, oo si fiican u qaboojiyey hay, maalmo qallafsan, oo la dhigay 1-2 dhalo biyo kulul. Waxa uu sheegay in uu hoos u dhigay dhibaatooyinka ba'an. Xaqiiqadu waa dhibaato, laakiin wali waxay eegaysaa iyaga dhowr jeer maalintii maalintii macnaheedu maaha in ay tagaan madhan.
Mordaha fiican, waxaan haystaa 10 caruur yaryar, 10kii oo dhanba waxay ku riixaan kabtanka maalinta dhalashada, oo laabta usbuucii usbuuc ka hor dhalashada, laakiin sidoo kale waxay dhacdaa: qoobkacaya, isla markiiba wuxuu soo riixay fluff iyo dhalashada, oo dhan 1 maalin. Marka kharashka gardarrada, tani waa sida qashinka oo kale, miino isku mid ah, ma dhameeyo isla markiiba ka dib markaad moodid;) Miyaad hadda dhalaysaa? Waxyaabo kale, waxaan ku shaqeynayaa hargabka jiilaalka, (bil ama labo bakaylaha yaryar, wax yar ayay cunaan, laakiin waxay heli doonaan cawska oo kaliya 2 bilood, waxaa lagu iibin doonaa dhammaadka May). Waan sakhraamay khamriga, laakiin waa qabow, inaan daacad ahaado, wareeray, maxaan sameeyaa? Xaqiiqdii, ma jirto wax lumi karo, waxaan soo qaatay oo aan suufka ku duuduubay buulka, waxaan kaliya ku duuduubay qaybo yaryar, oo aan ahayn lakab, kaas oo ku yaala duubka, waxaan ka baqayaa in yaryar aaney helin moobiilka, natiijada wax walba way wanaagsan tahay, qof kastana waa nool yahay, ,я у особо щедрых на пух самок подворовываю мех, и в мешочек на всякий случай. :)